Mpanamboatra sy mpamatsy Chain Assembly Chain Assembly | Pingtai
Araraoty ny fitrandrahana ny kiraro
Singa Sprocket hosoka
Fiaraha-miasa amin'ny fitrandrahana fiara fitaterana
Laharana maodely D11
Antsipirian'ny fonosana: Fumigate fonosana azo trandrahana
Fotoana fanaterana: 7-30 andro
Inona no maha samy hafa ny bulldozer sy ny excavator Track chain chain Chain
Ny hery eo amin'ny rojo fivoriambe miharo lozam-pifamoivoizana dia hery manohana lava, ary ny faritra miasa dia mifantoka amin'ny varingarina sy siny lehibe.
Bulldozer dia asa mandeha an-tongotra ihany, ny lanjany maherin'ny 20 taonina miampy enta-mavesatra feno dia lehibe tokoa, amin'ny alàlan'ny fisintonana marindrano ny rojo mba hahatonga ny fiara mandeha fiara, noho izany ny fahombiazan'ny ankapobeny ny rojo buldozer dia tsara kokoa noho ny excavator, Ny kalitaon'ny fitaovana amin'ny ankapobeny dia ny fanaovana vy maharitra 3MnB.
Misy elanelana misy eo amin'ny lanja sy ny tsivalana amin'ny rojo. Very maina ny rojo vy buldozer rehefa ampiasaina amin'ny excavator. Haharitra latsaky ny ela ny fampiasana ny rojo fandavahana ao amin'ilay bulldozer.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fivorian'ny rojom-baravarankely
Ny fitaovana rojo dia 35MnB hosoka, ary ny rohy sy ny pin dia 40Cr. Ny famonoana hafanana tsy tapaka sy ny fikolokoloana ny hafanana, ny hafanana antonony anatiny sy ivelany. Ny famolahana mazava tsara anatiny sy ivelany dia hatramin'ny 0.2. Ny fizotrany rehetra dia arahin'n'ny foiben-toeran'ny machining mitsangana. Mba hahatratrarana fetra avo lenta, maharitra fanoherana ary lava kokoa. Rehefa vita ny fivoriambe dia notifirina manontolo indray ny vokatra vita. Ny fisehoan'ny rojo dia vita amin'ny loko miorina amin'ny rano miorina amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny fametahana mafy kokoa, ka mahatonga ny endrika ankapobeny ho tsara tarehy sy avo lenta.
Araho ny mombamomba ny antsipirian'ny rojom-pifandraisana
Fampahalalana momba ny antsipirian'ny vokatra
Famaritana: Hanara-maso ny fivorian'ny rojom-pifandraisana MINING OPERATION
Isa maodely D11
Antsipirian'ny fonosana: Fumigate fonosana azo tantanana
Fe-potoana fandoavana: L / CT / T
Fe-potoana: FOB / CIF / CFR
Kaonty ambany indrindra: PC 1
Fahaizana manome: 10000 PCS / volana
Fitaovana: 35MnB / 40Cr
Fotoana fiantohana: 1600ora
Serivisy aorian'ny varotra: Fanohanana ara-teknika amin'ny horonan-tsary, Fanohanana an-tserasera
Loko: Maavo na mainty na mpanjifa takiana
Fampiharana: Mpihady Bulldozer & Crawler
Teo aloha: Singa Sprocket hosoka
Manaraka: Track Roller Double Flange
Adidy mavesatra nify
D11 Track roller fivoriambe indroa flange 9976194 ...
Bit mifarana roa, Excavator Bucket Cutting Edge, Excavator Bucket Wear Parts, Rubers Track Rollers, Bearing Track Roller, Bolt matanjaka avo,